महिला सारीमै सबैभन्दा बढी सुन्दर – rastriyakhabar.com
महिला सारीमै सबैभन्दा बढी सुन्दर
महिलाले चाहे जस्तोसुकै कपडा लगाउने गरुन्, अधिकांश पुरुषको आँखामा भने महिला सारीमै सबैभन्दा बढी सुन्दर सेक्सी देखिने गर्दछन् ।
भारतमा इन्डिया टुडेले गरेको सेक्स सर्भे २०१३ ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । सर्भेमा सहभागी ४४.५ प्रतिशत पुरुषको नजरमा सारीमा महिला सबभन्दा सुन्दर सेक्सी देखिने बताएका हुन् । त्यसो भए सारीमा त्यस्तो के छ त ? जसका कारण महिला बढी हट देखिन्छन् ।
यसको के कारण हुन सक्छ ?
किनभने सारी महिलाको परम्परागत रुपले शालिन पहिरन मानिन्छ । यो शालिनता नै महिलाको सुन्दरता भएको सर्भेको ठहर छ । साडीले महिलाको जति अंक ढाकेको हुन्छ, त्यही पुरुषलाई आकर्षित गर्न काफी हुने गर्दछ । ढाकेको सुन्दरता भद्दा खुलापनको तुलनामा महिलालाई बढी सेक्सी लुक दिने पुरुषहरुले बताएका छन् ।
साडीलाई देहमा कयौ पटक बेर्ने गरिन्छ । सेक्स सम्बन्ध कायम गर्नुअघि पुरुषलाई यो खोल्न निकै समय लाग्ने गर्दछ । पुरुषलाई यही अवधि बढी सेक्सी लाग्ने सर्वेको ठहर छ।
पछिल्लो केही समययता विद्या बालन र करिना जस्ता भारतीय नायिकाहरुसमेत चलचित्रको पर्दामा सारीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर साडीको मार्केटिङ गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय बजारमा कयौ प्रकारका साडी पाइन थालेको छ। त्यसैले साडी पुनः फेशनको दुनियामा चम्कदो छ । एजेन्सी